Ra’iisul Wasaare Khayre oo Booqday Faraca Jaamacadda Ummadda Ay ku Leedahay Caabuudwaaq (Daawo) – Radio Daljir
Juunyo 29, 2019 11:13 g 0
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta booqday faraca jaamacadda umadda ee magaalada Caabuudwaaq.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo ay wehliyeen qaar kamid ah wasiirrada xukuumadda oo laba kamid ah ay horay wax ugu barateen jaamacadda ummadda ayaa hoolka jaamacadda kula hadlay ardayda wax ka dhigata farca Caabuudwaaq ay ku leedahay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed.
Maamulka iyo ardayda jaamacadda oo aad usoo dhaweeyay booqashada Ra’iisul wasaaraha ayaa ka codsaday dowladda inay wax ka qabato baahiyaha ay jaamacaddu qabto si loo horumariyo, ayna awood ugu yeelato daboolidda baahida waxbarashada sare ee ay qabaan bushada ku nool deegaannada Galmudug.
Ra’iisul Wasaaraha oo khudbad ka jeediay jaamacadda ayaa ardayda ku boorriyay in ay ku dadaalaan waxbarashada si ay qayb uga noqdaan horumarka dalka, waxa uuna dhanka kale maamulka jaamacadda u ballan qaaday in dowladdu si deg-deg ah wax uga qabanayso baahiyaha hadda taagan.
Hoos ka daawo khudbadda khayre.
Warka Arooryo iyo Maxamed Xasan Dhallo, Daljir Garoowe (dhegayso)